Dzidza Nyanzvi Kubloga - Dzidza Nyanzvi Kubloga
Dzidza Nyanzvi Kubloga WordPress, SEO, Make Money Blogging, Kubatana Kushambadzira
Zvakanaka, these days no matter whether you are a small company or a big multinational company each one needs a website. The reason is that there are millions of people who use the internet Daily. And it becomes a great way to promote your business with the […]
Kugadzira blog webhusaiti zviri nyore. Kublogga ndeimwe yemhando yewebhusaiti iyo inonyanya kufunga nezvekunyora zvemukati. Ruzivo rwakakosha rwunopa kune vashandisi vanodzoka kuwebhusaiti yako kuti vaverenge zvinyorwa. Mune mumwe mutauro wakajairika, we have seen […]
Iwe unogona zvechokwadi kushandisa zvakabatana kushambadzira pamwe neAdSense pamwechete pane yako blog kana webhusaiti. Iyi inzira huru yekuvandudza kuita mari yako blog. Uri kutora mukana wezvose zviri zviviri, getting a commission by promoting your own or other people’s product as well as earn […]